!! #update #အရေးပေါ်ကြေညာချက် #MOI #Myanmar#Burma – democracy for burma
On January 26, 2015 January 28, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma
ထိုအဖွဲ့သည် မြင်းခြံမြို့သို့ ညနေ(၆)နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိလာရာ ၄င်းမြို့နယ်ရှိ အဖွဲ့ အစည်းအချို့မှလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်၍ မြို့တွင်းသို့လှည့်လည်ခဲ့ကြပြီးနောက် အဆိုပါ အဖွဲ့သည် မြင်းခြံမြို့ စွန်းလွန်းဂူကျောင်းတွင် ညအိပ် ရပ်နားခဲ့သည်။
ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ဗကသမှ အောင်မှိုင်းဆန်းဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့နှင့် ၄င်းမြို့ နယ်ရှိ အဖွဲ့အစည်းအချို့ပူးပေါင်း အင်အား(၂၇၅)ဦးသည် မြင်းခြံမြို့တွင်း လှည့်လည် လမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီး ရွာစည်ကျေးရွာ အနီးရှိ မြင်းခြံ ဒီဂရီကောလိပ် သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာ မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုမြင့်နှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများက ကျောင်းတွင်း မ၀င်ရန် တားမြစ်ခဲ့သော်လည်း ပိတ် ထားသော ကျောင်း တံခါးအား အတင်းတွန်း ဖွင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ပင်မကျောင်းဆောင်ရှေ့သို့ ရောက်ရှိပြီး ပင်မကျောင်း ဆောင်ရှေ့ရှိ လွှင့်ထူ ထားသော နိုင်ငံတော်အလံအားဖြုတ်ချ ကာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂအလံအား လွှင့်ထူခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ လွှင့်ထူစဉ် ကျောင်းစောင့် (၃)ဦးက တားမြစ်သော် လည်း ကျောင်းသားများက တွန်းဖယ်ပြီး ဆက်လက်ဆောင် ရွက်ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
နိုင်ငံတော်အလံအား ဖြုတ်ချ၍ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအလံအား လွှင့်ထူခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြင်းခြံမြို့မရဲစခန်းက နိုင်ငံတော်အလံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆ အရ အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အခု မြင်းခြံစွန်းလွန်း ဂူကျောင်း
ရဲများ ရောက်ရှိနေပါပြီ ။ အင်တာနက် လိုင်းများဖြတ်တောက်ထား၍ အတွင်းစည်းမှ ကျောင်းသားများ
မည်သို့မျှ အဆက်သွယ်မရပါ ။
မိဘ ပြည်သူများမှ လက်နှိပိဓာတ်မီးများ ယူဆောက်လာပြီး ကျောင်းသား
များအား ဝန်းရံပေးကြစေလိုပါသည် ။
ရ၍ များများ share ပြီး လက်ဆင့်
ကမ်းပေးစေလိုပါသည် ။ CR. Ahngai Kong Ahngai
မြင်းခြံအထွက် အာဏာပိုင်များ လုံခြုံရေးတာဝန်မယူတော့
မြင်းခြံမြို့ စွန်းလွန်းဂူကျောင်းတိုက်မှာ တည်းခိုနေတဲ့ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေကို မြင်းခြံခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ခရိုင်ရဲမှူးနဲ့ မြို့နယ်မှူးတို့ဟာ ဒီကနေ့ည ၈နာရီကျော်မှာ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြင်းခြံမြို့အပြင်ကို ထွက်ခွာတဲ့အခါ သူတို့အနေနဲ့ လုံခြုံရေးအရ တာဝန်ယူမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်း လာရောက်ဆွေးနွေးသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ည ၈နာရီခွဲကစပြီး မြင်းခြံမြို့မှာရှိတဲ့ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်လိုင်းတွေ ဆက်သွယ်လို့မရတော့တာကြောင့် အာဏာပိုင်တွေက ဖြတ်တောက်လိုက်တယ်လို့ ယူဆနေချိန်မှာ တောင်သာဘက်က စွမ်းအားရှင်လို့ယူဆလို့ရတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ လူ အင်အား ၂ဝဝကျော်ဟာ မြင်းခြံဘက်ကို လာရောက်နေတာကြောင့် မြင်းခြံတစ်မြို့လုံး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေကြတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလသတင်းတွေ ပြန့်နေပါတယ်။
ကျောင်းသားသပိတ်ဟာ မနက်ဖြန်မနက် (ဇန်နဝါရီ ၂၇)မှာ မြင်းခြံကနေ ကျောက်ပတောင်းကိုအသွား တောင်သာကို ဖြတ်သန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာထားပြီး မြင်းခြံမြို့အပြင်မှာလည်း သံဆူးကြိုးတွေနဲ့ ပိတ်ကာချထားလိုက်တယ်လို့ နောက်ဆုံးဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ တယ်လီဖုန်းသတင်းအရ သိရပါတယ်။ မြင်းခြံမှာတော့ ကျောင်းသားသပိတ်ကို ကူညီဖို့ နာရေးကူညီမှုအသင်းတွေက ပရဟိတအဖွဲ့တွေဟာ ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကို ထောက်ပံ့နေပါတယ်။
88 studentsအခု မြင်းခြံစွန်းလွန်း ဂူကျောင်းအင်တာနက်လိုင်းများ ဖြတ်တောက်အရေးပေါ်ကြေညာချက်Breaking NewsBurmaMOI MyanmarMyanmarNATIONAL EDUCATION LAWNATIONAL FLAG DOWNPakokku Student's Boycott movementstudent protest marchUpdate
#CHINA #LOGGERS #PETITION #FREE #ILLEGAL #WORKERS #KACHIN #BURMA #MYANMAR
#BURMA #MYANMAR #Myingyan #NATIONAL #FLAG #TAKEN #DOWN BY #GROUP #STUDENT #PROTESTERS